MOTOROLA News: Launch, Ekwentị, Mbadamba na More - Androidsis | Gam akporo (Peeji nke 2)
Ihe ntụgharị ọhụrụ nke Motorola Moto G Stylus 2021 na-ekwu maka imepụta ọhụụ
Ihe onyonyo ohuru nke Motorola Moto G Stylus 2021 apụtawo na-egosi nchacha mma.
Ndị a bụ ụdị 21 Motorola nke a ga-emelite na gam akporo 11
Motorola ekwuputala ọkwa nke ga-emelite na gam akporo 11 na 2021.
Moto G Stylus (2021) sitere na Amazon ma gosiputa data ohuru
Moto G Stylus (2021) pụtara site na Amazon USA na-ekpughe atụmatụ ya na data ọhụrụ nke mpempe akwụkwọ teknụzụ. Chọpụta uru ha bara.
Motorola Nio ga-abụ ekwentị izizi ga - enwe 105 Hz panel
Motorola Nio egosiworị nkọwa mbụ ya ma gosipụta ọnụego ume ihuenyo. Anyị na-ekpughe ihe niile banyere ya.
Edere nhazi na akụkụ nke njirimara nke Moto E7
N'oge na-adịbeghị anya Motorola akwụsịghị ịmalite ngwaahịa ọhụrụ. Ọnwa ole na ole gara aga anyị gwara gị maka Moto E7 Plus, ọnụ ya na ...
A na-ekwupụta Moto G9 Power na Moto G 5G na nnukwu ákwà na nnukwu batrị
Motorola ekwuputala Moto G9 Power na Moto G 5G ọhụrụ, ekwentị mkpanaaka abụọ dị n'etiti na nnukwu batrị. Mara ihe omuma nile nke uzo.
Moto G 5G: ya isi atụmatụ na nkọwa na-leaked
Ejirila atụmatụ ndị isi na teknụzụ nke Motorola Moto G 5G. Anyị na-eme ka ị mara!
The Motorola ihu + bụ ezigbo nhọrọ maka ụda mmeputakwa ekele maka ya okwu stereo [Nyochaa]
DxOMark nwalere Motorola Edge + iji chọpụta otú o si dị mma n'ụdị ụda na ndekọ.
Ugbu a dị na Spain Moto G9 Plus maka euro 269
Otu izu mgbe ngosipụta ya gosipụtara, Motorola Moto G9 Plus ọhụrụ dị ugbu a na Spain maka euro 269.
A mara ọkwa Moto E7 Plus na batrị Snapdragon 460 na 5.000 mAh
Motorola egosila Moto E7 Plus ọhụụ yana usoro nhazi yana ndụ batrị dị elu ruo ụbọchị 2. Mụtakwuo.
Emeela Moto G9 Plus: ọ na-abịa na ihuenyo nwere ihu, Snapdragon 730G na nnukwu batrị
Motorola Moto G9 Plus bụzi ọrụ. Mara njirimara ya niile, nkọwapụta teknụzụ na nkọwa nke ọnụahịa na nnweta.
Motorola Razr 5G bu nke ohuru apughi ibido uzo ozo nke ejiri Qualcomm si Snapdragon 765G na otutu.
Ekwuputara Moto G9 Play: Snapdragon 662 na Batrị Ike
Motorola ekwuputala ọkwa ọhụrụ Moto G9 Play na SD662 na nnukwu batrị dị elu.
Moto E7 ga-abịa ngwa ngwa na batrị 5.000 mAh: ọnụahịa ya na nkọwa ndị ọzọ ekpughere
Ike batrị nke Motorola Moto E7 agbapụla. Etuola ihe nkọwa ya na atụmatụ ya.
Motorola ọhụrụ Moto RAZR 5G mpịachi ama ama nwere a tọhapụ ụbọchị
Ọhụrụ Moto RAZR 5G mpịachi ama ama nwere ihe ukara igba ụbọchị, nke ndokwa maka September.
Moto G9 Plus na-aga site na FCC na-egosi ụfọdụ njirimara isi
Motorola gafere Moto G9 Plus site na FCC tupu oge eruo ma kpughee ụfọdụ ngwaike ngwaike, yana batrị ya.
E gosipụtara Moto E7 na ụgbọelu tupu ọkwa ọkwa ya
Moto E7 agbachapụla kpamkpam tupu ụlọ ọrụ ahụ eweta ya, onye ga-ebupụta ya dị ka ngwaọrụ ntinye.
E nwere ike ịhụ nkọwapụta izizi nke Moto G9 Play na Geekbench
Geekbench ekpughewo ọtụtụ ihe na-adọrọ mmasị banyere nkọwapụta teknụzụ nke Motorola's Moto G9 Play, otu n'ime etiti dị nso.
Moto G 5G Plus bụ ọrụ: 6,7 ″ ihuenyo, njikọ 5G yana nnwere onwe nke ụbọchị 2
Motorola egosila Moto G 5G Plus ọhụụ, nnukwu ama ama nwere batrị dị ike nke nwere ihe ruru ụbọchị abụọ nke nnwere onwe.
Ekwuputara Motorola One Fusion: HD + Screen, Snapdragon 710 na Batrị Ike Ike
Motorola ewebatala One Fusion, ama dị n'etiti etiti ama nwere obodo kwụụrụ onwe ya ma wepụta ya ka ọ gafee ihe karịrị otu ụbọchị.
Moto G 5G ga-abịa na Snapdragon 765 na 90 Hz panel, a ga-enwe ụdị dị iche iche
Motorola ga-eweta ekwentị ọhụrụ abụọ na July 7, nke mbụ ga-abụ Moto G 5G, ebe a ga-enwe ụdị dị iche iche.
Moto G na-alaghachi n'ọnụ ụzọ ụzọ, nke a bụ imewe ya
Anyị na-agwa gị nkọwa nke mbụ nke Moto G,
Moto Edge Lite bụ onye FCC gbaara: Ọ ga - abụ ekwentị 5G
FCC na-egosi ihe akụrụngwa sitere na Motorola, Moto Edge Lite. Ihe izizi enwere ike ime nke ekwentị.
Ọgbọ nke abụọ Motorola RAZR lara azụ na 2021
Ọgbọ nke abụọ nke Moto RAZR, egbuola oge mbido ya ruo 2021, n'ihi ọrịa na-efe efe nke butere coronavirus
Moto G7 Play na-amalite ịnata gam akporo 10
Nke nta nke nta, onye nrụpụta America nke Lenovo nwere gara n'ihu na-emegharị ezinụlọ Moto G. Anyị agwala gị maka ...
Moto G7 Ike na-amalite ịnata gam akporo 10
Moto G7 Ike amalitela ịnata mmelite gam akporo 10 a na-eche ogologo oge, mmelite nke dị ugbu a na Brazil
Motorola One Fusion + bụ ekwentị ọhụrụ nwere Snapdragon 730 na 64 MP igwefoto malitere maka ihe na-erughị euro 300
Motorola amalitela ekwentị ọhụụ nke gosipụtara chipset Snapdragon 730 nke Qualcomm na igwefoto 64 MP. Ọ na-abịa dị ka Otu Fusion +.
Moto E LE na egosiputa n’ime onyonyo ohuru ma kpochapu ihe edere ya
N'oge na-adịghị anya, Motorola ga-ekwuputa Moto E LE ọhụrụ, ngwaọrụ ntinye na ọnụahịa mara mma maka ahịa dị iche iche.
Moto E 2020 na Moto G Fast bụ ndị ọrụ: Android 10 ọhụrụ abanyela
Motorola egosila igwe ekwentị ọhụrụ abụọ, Moto G Fast na Moto E 2020. Ngwaọrụ abụọ nwere gam akporo 10.
Motorola RAZR 2 ga-abịa na Septemba na akụkọ ndị a
Anyị amatalarịrị asịrị mbụ metụtara ihe ga-abụ ọgbọ nke abụọ nke ekwentị Motorola nke mpịachi, RAZR
Moto G7 malitere ịnata gam akporo 10
Mmelite a na-eche ogologo oge na gam akporo 10 nke Moto G7 amalitela ịdị na Brazil, mana ọ ga-ewe ụbọchị ole na ole iji ruo ụwa.
Motorola chọrọ ka anyị mepee RAZR obere ka o kwere omume site na mmelite ya na gam akporo 10
Imelite nke Android 10 maka Motorola RAZR amalitela ịdị ma lekwasị anya n'inye ọrụ ka ukwuu na ihuenyo mpụta.
Moto Edge na Moto Edge + bụ ndị ọrụ: Ngwaọrụ 5G ọhụrụ dị elu
Motorola egosila Moto Edge na Moto Edge +, ekwentị abụọ nke premum abụọ. Ha abụọ ga-erute n’ahịa ndị Europe.
Motorola ga-ekwuputa Moto Edge na Moto Edge + n’ihe dị ka otu izu. Anyị maara nkọwa ndị mbụ tupu e gosipụtara anyị n'ihu ọha.
Verizon si Moto Z4 N'ikpeazụ Enweta gam akporo 10
Verizon na-enyezi ngwungwu ngwa ngwa gam akporo 10 ọhụrụ maka Moto Z4 nke etiti akpọchiri.
The Motorola Otu na-enweta gam akporo 10 update
Gam akporo 10 ka adighi erute ekwenti nile, ma nke nta nke nta o na eme ya, ma ugbua o lee Motorola One anya.
Moto G8 Power Lite na-egosi nnweta ya na ọnụahịa ya n'ịntanetị
Egosiputa Moto G8 Power Lite n'ọtụtụ ihe onyonyo tupu emee ya n'ihu ọha, ọ makwaara ọnụahịa na nnweta.
Smartphones kacha mma dị ọnụ ala maka ụbọchị nna
Taa, anyị na-ewetara gị a-akpali nnọọ mmasị n'elu 5 banyere ndị kasị mma ọnụ ala smartphones na ị nwere ike inye pụọ maka Nna Day
Motorola's Moto Z4 amalite inweta mmelite gam akporo 10
Motorola amalitela inye ihe gam akporo 10 maka Motorola's Moto Z4 site na OTA ohuru nke na-achụsasị ụwa niile.
Motorola Moto Edge + ụdịdị igwefoto na-agba ọsọ: ihe mmetụta 108 MP na anya
Ihe omuma ohuru banyere Motorola Moto Edge + abiala ihe. Onye a na-ekwu maka nkọwa nke igwefoto gị.
Motorola Edge, nke a ga - abụ Motorola flagship na - esote
Anyị na-agwa gị nkọwa nke mbụ nke Motorola Edge, Motorola na-esote ọkọlọtọ na nke ga-apụta maka ngwaike dị ike nke na-ebute ọnụ.
Motorola One Action amalitela inweta gam akporo 10
Lenovo amaliteworị iwepụta ihe gam akporo 10 maka Motorola One Action. Nke a na-abịa na ọtụtụ ọhụrụ atụmatụ.
A mara ọkwa Moto G Stylus na Moto G8 Power
Motorola ekwuputala ọkwa Smartphone ọhụrụ ya abụọ Moto G Stylus na Moto G8 Power. Ha abụọ ga-abata na mmiri.
Motorola si Moto G Stylus gba ọtọ: ya isi nkọwa na-ekpughe [+ Renders]
The isi atụmatụ na teknuzu nkọwa nke Motorola Moto G Stylus e leaked tinyere ụfọdụ ihe oyiyi.
Oge ahia nke ubochi: nweta ego kachasi ala Motorola One Action 100 euro
Echefula ego a ịzụta Motorola One Action na ọnụahịa kacha mma. Ma, ugbu a ị nwere ike nweta ya 100 euro dị ọnụ ala karịa na Amazon.
Ekwere na Motorola Moto Z5 nwere nnukwu batrị 5000 mAh
Ọhụrụ ọhụụ apụtawo na nchekwa data FCC. Ọ bụ na-azọrọ na Moto Z5 na e gbaara.
Motorola na-ekwupụta ihe omume na Barcelona maka February 23
Motorola na-eme atụmatụ iweta ọtụtụ ngwaọrụ mkpanaka tupu mmalite nke Mobile World Congress 2020 ihe omume na Barcelona.
Nke a bụ otú Motorola si Moto G8 si ese foto ya
Motorola si Moto G8 e leaked ke ọhụrụ sụgharịrị oyiyi na-ekpughe ya dum adịchaghị n'etiti-nso ekwentị imewe.
Motorola Edge Plus agafeela n'aka Geekbench na Snapdragon 865 na 12 GB nke RAM
Ihe ama ama nke Geekbench edebanyela Motorola Edge Plus na nchekwa data ya na Snapdragon 865 na 12GB nke RAM.
Na nkwaghari nke nwere ike ibute mgbanwe na mmasị ndị ọrụ, Motorola na-ekwu na ihuenyo RAZR nwere ike bụrụ lumpy site n'iji ya eme ihe.
New Motorola ekwentị na ngwa anya stylus leaks
Onyogho nke Motorola ekwentị ọhụrụ nwere mkpịsị arụ na - apụ apụ, ọ ga - abụ ụdị izizi ga - abata na njirimara a.
Motorola na-akwadebe mbipụta 5G nke mpịachi ekwentị ya Razr
Motorola ga-ebupụta ụdị nke Razr 2019 site na iji ihe nhazi dị ike nke ga-enwe modem 5G iji dakọtara na netwọkụ ọhụụ dị elu.
Motorola's Moto G7 Plus malitere ịnata gam akporo 10
Ihe gam akporo 10 maka Motorola Moto G7 Plus amalitela idi na Brazil, ya mere o gha ewe ogologo oge iru mba ndi ozo.
Motorola Razr na-egbu oge ịmalite ahịa ya
Motorola Razr ga - ewe obere oge iji rute n'ahịa ahụ n'ihi oke mkpa dị na United States ma ga-abata na Jenụwarị.
The Motorola Razr ga-abata na Spain na Jenụwarị
Afọ anyị na-aga ịkwụsị bụ afọ nke mpịachi mobiles. Samsung webatara na mbụ ...
Stabledị anụ nke gam akporo 10 na-abịa Motorola One Power
Motorola One Power ga-eji nke nta nke nta nweta ụdị gam akporo ọhụrụ na mba dị iche iche ebe ọ dị.
Motorola na-ezube iwepụta Hyper ọhụrụ ahụ n’ime awa ole na ole sochirinụ, ngwaọrụ nke ga-adọta uche ọha na eze maka igwefoto ya na-agbapụta agbapụta.
A ga-enye Motorola One Hyper na December
Motorola One Hyper ga-arụ ọrụ na Disemba 3 na ihe omume na Brazil dịka ọ ga-adịrịrịrịrịrị na netwọk ahụ. Ekwentị ọhụrụ n'ime nso.
Motorola Razr nwere ọnụahịa akwadoro na Spain
Motorola na-akwado ọnụahịa ahịa nke Motorola Razr na Spain na ọ ga-abụ ekwentị kachasị ọnụ ala ịhịa ahịa.
Na-achọ ekwentị nwere ezigbo igwefoto? Motorola One Zoom dị ọnụ ala karịa oge ọ bụla
Na-achọ ekwentị nwere ezigbo igwefoto? Motorola One Zoom dị ọnụ ala karịa oge ọ bụla na Amazon, yabụ echefula ohere a.
Ihe osise nke Motorola RAZR ọhụrụ ahụ na-agbapụ, ama ama ọhụụ ọhụụ na-ada n'ahịa
Dbọchị tupu ngosipụta nke ọhụụ nke ọgbọ ọhụrụ nke Motorola RAZR, a na-enyocha ọtụtụ ihe oyiyi na-egosi anyị imewe ahụ na ịma mma ya niile.
Chọpụtakwuo banyere mbupute gọọmentị nke Motorola One Macro na Spain dịka ụlọ ọrụ n'onwe ya kwupụtara ọkwa ya na weebụsaịtị.
Motorola na-agbanye Moto G8 Plus na Moto E6 Play na etiti ya na ọkwa ntinye ya
Motorola gosipụtara Moto G8 Plus ka ọ sọọ mpi n'etiti na Moto E6 Plus, maka ntinye ntinye. Nkọwa niile n’isiokwu a.
Motorola One Hyper, aha otu ụlọ ọrụ na-esote smartphones
Lenovo na-eme atụmatụ ịmalite ekwentị dịpụrụ adịpụ tupu njedebe nke afọ a ga-akpọ Motorola One Hyper.
Chọpụta ihe banyere imewe nke Moto E6 Play ga-enwe, ekwentị ọhụrụ n'ime obere ala nke Motorola nke ga-ada ahịa ahụ n'oge na-adịghị anya.
Motorola RAZR nwere ụbọchị ngosi
Chọpụtakwuo ihe ngosipụta nke ngosipụta nke Motorola RAZR nke ụlọ ọrụ ahụ ekwenyela na ọ ga-abụ onye ọrụ na ọnwa.
Motorola Moto G8 tọhapụ ụbọchị na imewe gosipụtara
The Motorola Moto G8 apụtawo na ya sụgharịrị oyiyi dị ka okpukpu atọ n'azụ igwefoto ekwentị. E kpughere ụbọchị ọ ga-ewepụta.
Motorola One Macro: Ebe ọhụụ ọhụrụ maka macro foto
Chọpụta ihe niile gbasara Motorola One Macro, ụlọ ọrụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ maka foto macro na nke a, nke bụ gọọmentị na India.
A na - ehichapụ foto ndị mbụ nke Motorola nwere igwefoto na-agba agba
Chọpụta ihe banyere Motorola ezube ka eze wepụta slide-apụ igwefoto ekwentị dị ka leaked na foto ugbua.
Moto E6 Plus ka emeputara na Spain
Chọpụta ihe banyere ukara mwepụta nke Moto E6 Plus na Spain dị ka Motorola esesịn mara ọkwa na ya website na eze.
Motorola RAZR, usoro mpịachi anyị tụrụ anya ya
Motorola RAZR, n'emeghị mkpọtụ dị ka Huawei ma ọ bụ Samsung, nwere ike gbanwee usoro mpịachi na atụmatụ dị mma karị.
Motorola RAZR ga-eweta na njedebe nke afọ
Chọpụta karịa banyere nkwenye na a ga-ewepụta Motorola RAZR n'ihu njedebe nke afọ dị ka ekwenyelarị.
E gosiputara Moto E6s n’ihu ọha
Chọpụta ihe banyere ngosipụta nke gọọmentị nke Moto E6s, ekwentị ọhụrụ dị ala site na Motorola nke emegoro n'ihu ọha.
A ga-eme Moto E6s ọkwa nke a na Septemba 16
Lenovo gbanwere usoro Moto E na nso nso a na July na Moto E6 ọhụrụ. Ọnụ a bụ ọnụ ala ...
Motorola ịmalitegharị ekwentị ndị dị elu
Chọpụta karịa maka atụmatụ Motorola maka ịmalitegharị ekwentị n'ime ọkwa dị elu dị ka onye isi ahịa na-ere ahịa gosipụtara.
Motorola One Macro dị na mmepe, dị ka asambodo na-adịbeghị anya
Motorola elekwasịghị anya na Moto G dị ka ọtụtụ afọ gara aga. Ntinye aka, n'agbanyeghị eziokwu ahụ ...
Emebere Motorola One Zoom na Spain
Chọpụta ihe banyere mwepụta nke a Motorola One bia eze na Spain na mbipute na Amazon si Alexa dị ka onye nnyemaaka.
Motorola One Zoom: Ebe a na-eme egwuregwu dị n'etiti foto
Chọpụta nkọwa zuru ezu nke Motorola One Zoom nke egosiri na IFA 2019 na Berlin na nke anyị maara ihe niile.
Motorola One bia nkọwa leaked
Chọpụta nkọwa zuru ezu nke Motorola One Zoom nke edobelarịrịrị ọkwa eze ma gosipụta ya na IFA 2019.
Chọpụta karịa gbasara mmalite ahịa na Spain nke Motorola One Action nke anyị nwere ike ịzụta ugbu a na ụlọ ahịa.
Ajucha foto mbu nke Moto E6 Plus
Chọpụta ihe banyere foto mbụ nke na-leaked nke Moto E6 Plus na-ekwe ka anyị hụ ihe imewe a ekwentị nke ika ga-enwe.
Ekwentị mpịachi Motorola, RAZR 2019, ga-adị ọnụ ala karịa ụdị Samsung na Huawei
Dabere na leaks ndị kachasị ọhụrụ, Motorola RAZR 2019 ga-enwe ọnụego ọnụahịa nke euro 1500 ma rute ahịa na njedebe nke 2019.
Choputa data ohuru nke ekpuchitere banyere Motorola RAZR 2019 nke yiri ka ọ eruola ntakịrị ịbịaru ahịa ma weta mgbanwe.
Chọpụta nkọwa zuru ezu nke Motorola One Action nke ewepụtarala n'ihu ọha na ihe omume na Brazil ma na-abịa n'oge na-adịghị anya.
Chọpụta karịa banyere ngosipụta nke Motorola One Action onye ụlọ ọrụ gosipụtara na ụbọchị ya na netwọkụ mmekọrịta.
Nkọwapụta teknụzụ niile nke Motorola One Zoom apụtala
Motorola One Zoom ga-abụ ama ama Lenovo ga-ebido. Tupu nke ahụ emee, nkọwa niile nke ọnụ ahịa a abanyela.
Moto E6: orodị Motorola dị ọnụ ala
Chọpụta ihe banyere mwepụta nke Moto E6 na ahịa, ọhụrụ ala-ọgwụgwụ ekwentị si Motorola na-ama na e gosipụtara n'ihu ọha.
Motorola One Action pụtara na gam akporo gam akporo, yana ọtụtụ nkọwa ya
Edepụtara Motorola One Action site na Google's Android Enterprise na-atụ aro maka ikpo okwu. E gosipụtara nkọwapụta nkọwa ya n'ụzọ zuru ezu.
Nke a bụ ego ọnụahịa ndị Motorola P50 ga-enwe
Ọnụahịa Motorola P50 emeela ka ọ bụrụ ọkwa site na mmemme ahịa. Ọ ga-enwe ụdị atụmatụ ọnụahịa ahụ anyị ji.
Mbido na isi nkọwa nke Motorola P50 ka emeela ka ọ kwado ya
Onye isi oche Lenovo Chang Cheng ekpughela ọtụtụ nkọwa Motorola P50, yana oge a ga-ewepụta ya.
Motorola's Moto Z4 ga-enweta gam akporo Q dị ka mmelite ikpeazụ kachasị
Gam akporo Q ga-abụ ụdị kachasị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ nke Google iji nweta midoto Moto Z4.
New sụgharịrị nke Moto E6 na-egosi na-egosi na akwado ya nile imewe
Ole na ole ọhụrụ sụgharịrị oyiyi nke Motorola Moto E6 abịawo na ìhè. Ihe ndi a gosiputara udiri ihe edeputara na mbu nke ntinye.
A na-ahụ Motorola One Action n'ụzọ zuru ezu na onyonyo ọhụụ ọhụrụ
Ihe ọzọ Lenovo ga - ewepụta ga - abụ Motorola One Action, ama nke anyị kwurula maka ya ...
Motorola One Action Full ụdịdị Leaked n'ihu nke Launch
Nkọwapụta zuru ezu nke Motorola One Action apụtawo, anyị na-ekpughere ha na ohere ọhụụ a. Mara ha niile!
Geekbench na-egosi ụfọdụ ụdị nkọwa nke Moto E6 Plus
Moto E6 Plus bụ smartphone na-abịanụ site na ika nke Lenovo nwere ugbu a ka edebanyere aha na Geekbench nchekwa data.
Motorola kwadoro ya agaghị ahapụ Moto Z4 Force ma ọ bụ Moto Z4 Play
Motorola gosipụtara na ọ gaghị ebupụta igwe ọhụrụ Moto Z, yabụ Moto Z4 Force na Play agaghị akụ ahịa ahụ.
Motorola One Action na-aga site na Geekbench ma kpughee ụfọdụ nkọwa ya
Motorola One Action emeela ka ọ banye na akara Geekbench. N'ebe ahụ ka ekpughela ụfọdụ njirimara ya na nkọwapụta teknụzụ ya.
Moto Z4 bụ ukara na Snapdragon 675 na ihuenyo 6,4 ″ OLED
Ekwentị dị mma na nhazi ya na nke anyị maara dịka Motorola's Moto Z4. N'ọnwa June ka ọ ga-aga ire ere iji nwee ike inweta ya.
Moto Z4 na-eme ka ọ banye na Geekbench na Snapdragon 675
E gosipụtara Motorola's Moto Z4 na Geekbench, usoro nyocha ntanetị. N'ebe ahụ, ngwaọrụ ahụ gosipụtara ụfọdụ nkọwa ya.
Motorola bara uru ọzọ n'ihi Motorola One na Moto GX
Chọpụta karịa oge Motorola nke bara uru ọzọ maka ekwentị abụọ na katalọgụ ya.
Chọpụta ihe gbasara Motorola One Vision, ọgbọ nke abụọ nke ika a na gam akporo Otu nke ewebatalarị n'ihu ọha.
Enwetakwu nkọwa na nsụgharị ọhụrụ apụtawo banyere Motorola One Vision, nke na-abịa na ngosipụta oghere na Android One.
A ọhụrụ ihihi enen niile nkọwa na atụmatụ na e leaked si Motorola na-atụ anya Moto Z4.
Moto E6 sụgharịrị ka 91Mobiles kesara ugbu a, onye kwuru na ya nwere anya pụrụ iche na ha. Ka anyị lee ya ọzọ!
Dị iche iche nkọwa na price nke Moto Z4 ayarade. Ọzọkwa, isi nkọwa na price nke Moto Z4 Force nwekwara a leaked.
Motorola One Vision nwere ụbọchị ngosi
Chọpụta ihe niile anyị matara ugbu a gbasara Motorola One Vision, nke gosipụtara ụbọchị ọ ga-egosi ya.
Nsụgharị a na-akwado atụmatụ nke ekwentị mpịachi Motorola
Nzube nke ekwentị Motorola na-atụgharị ekwentị. Ma ugbu a, anyị nwere ike ikwenye ihe RAZR V4 ga-adị ka mgbakwunye mgbakwunye nke ngwa ọ ga-enwe.
Akwụkwọ ndị India bipụtara n'oge na-adịbeghị anya kọọrọ isi nkọwa na atụmatụ nke Moto Z4, na-ekpuchighị ya.
Motorola ẹkedori ọtụtụ igwe na Android One anya
Chọpụta karịa banyere atụmatụ Motorola na afọ a ga-ebupụta ekwentị ọhụrụ anọ na-eji Android One dị ka sistemụ arụmọrụ.
Chọpụta ihe banyere mmalite nke Moto G7 Play na Spain, nke na-eme ka ọkwa niile dị maka ịzụta.
Echiche a na-egosi anyị etu ekwentị mkpirisi ekwentị Motorola ga-adị
Anyị na-egosi gị ihe nlere vidiyo nke na-enye anyị ohere ịmatakwu ụdị atụmatụ nke ekwentị mpịachi Motorola ga-adị. Ọ ga-aga nke ọma?
Motorola P40 Play, nke a ga-abụ atụmatụ nke ekwentị ọhụrụ dị ọnụ ala nke ụlọ ọrụ ahụ
Anyị na-egosi gị nkọwa niile nke atụmatụ nke Motorola P40 Play, nke pụtara na nsụgharị, yana vidiyo nke na-ahapụ obere ihe n'echiche.
Motorola na-arụ ọrụ na ekwentị mkpanaaka ọhụụ ga-apụta maka ịnye atụmatụ ọhụụ ọhụrụ. Anyị na-egosi gị nkọwa niile, enwere vidiyo!
Nyocha vidiyo Moto G7, ezigbo ngwanrọ gam akporo nke nnukwu ihe ndọghachi bụ batrị ya
Nyochaa vidiyo na nyocha nke Moto G7 mara mma nke Android nke m nwere nnukwu nzaghachi nke na-agaghị ekwe ka ọ lụọ ọgụ na mpaghara dị n'etiti.
Ihe ọhụrụ nke Motorola One Vision na-akwado ihuenyo ọhụụ na 48 MP igwefoto
Anyị na-anụ ọtụtụ ihe banyere Motorola One Vision na ụbọchị ndị na-adịbeghị anya. Ugbu a, otu onye ọrụ mgbasa ozi nke Onye ọhụụ na-apụta apụtawo.
Otu n'ime Motorola na-abịa n'etiti, Moto Z4 Play, natara asambodo si FCC, a US usoro iwu gị n'ụlọnga.
The Motorola One ọhụụ e leaked. Ekpughewo nkọwapụta teknụzụ ya na njirimara ya.
Motorola One Vision tours Geekbench na Exynos 9610
Motorola One Vision pụtara na Geekbench platform yana Samsung Exynos 9610. Ọ ga-abụ Motorola P40.
Motorola kwadoro na ọ ga-enwe ekwentị foldable
Chọpụta karịa maka atụmatụ Motorola iji malite ekwentị foldable dị ka ekwenye na ihe omume n'izu a.
Nke a ga-abụ Motorola Moto Mod 5G: ọ pụtara na FCC
5G Moto Mod apụtawo na FCC. Achọpụtala nkọwa ya dị iche iche na ndepụta ndị na-adịbeghị anya nke ụlọ ọrụ asambodo US.
Motorola P40: Ekwentị mbụ Punch-ihuenyo ekwentị ga-abịa na Exynos 9610 SoC
Motorola P40 ga-abụ ekwentị izizi nke ụlọ ọrụ ahụ iji rute ihuenyo juputara. Na ntughari, ị ga-enwe Exynos 9610 SoC.
Moto RAZR 2019 vidiyo na sụgharịrị leaked: ekpughere nkọwa na imewe
Motorola's foldable smartphone, nke aha ya bụ "Moto RAZR 2019", abanyela site na nsụgharị dị iche iche na vidiyo echiche.
Moto G4 Plus na-emesị nweta gam akporo Oreo: ọ malitere na United States
Moto G4 Plus na-enwetakwa gam akporo Oreo melite, ebe ọ na-eche ogologo oge.
Leaked on video imewe nke foldable Motorola RAZR
Choputa ihe banyere imewe nke ohuru a na - akpo Motorola RAZR ga - adi na vidiyo a nke na enye gi ohere ihu otu o si aru oru.
Chọpụta ihe banyere Motorola ọhụrụ n'etiti, na Moto G7 Power na Moto G7 Play onye nkọwa ya, ọnụahịa ya na mbido ya bụ ọrụ.
Chọpụta nkọwa, ọnụahịa na ụbọchị ntọhapụ nke Moto G7 na Moto G7 Plus nke Motorola ewepụtala ya n’ihu ọha.
Ederede ndị India kesara ozi dị oke mkpa na Moto Z4 Play nkọwa, na-ezo aka na isi mmalite a na-amaghị aha ya.
Motorola Moto G7 yiri ka agbapụwo na TENAA yana nkọwa ya
Ekwentị Motorola ọhụrụ nwere akara ngosi 'XT1965-6' pụtara na TENAA. Ọ ga-abụ ọdịiche ndị China nke Moto G7 ma ọ bụ G7 Plus.
Moto G6 na Moto G6 Play na-amalite ịnata beta nke gam akporo
Ezie na Motorola Moto G7 usoro di na akuku, Motorola echefubeghi ...
Kwuru na ndepụta gọọmentị na-etinye nkọwa zuru ezu nke usoro Moto G7
Echere na ndepụta gọọmentị nke nkọwapụta maka ọbịbịa Moto G7 nke Lenovo agafeela. E gosipụtara atụmatụ ya bụ isi.
Moto G7 enweela ụbọchị ngosi
Chọpụta ihe banyere ụbọchị ngosi nke Motorola Moto G7 nke a ga-ewepụta n'ihu ọha na February 7 na Brazil.
Ikike nchọpụta gosipụtara atụmatụ nke Moto RAZR, ekwentị mkpirisi Motorola mbụ
Ikike nchọpụta amịpụtara egosipụtara anyị atụmatụ nke ekwentị mkpanaka Motorola, Moto RAZR folda ele anya nke a ga-ekpughe na MWC 2019.
Moto G7 Play na-agafe Geekbench na Snapdragon 625 n'ụgbọ
Ejirila Moto G7 Play na Geekbench nwere octa-core Snapdragon 625. Ọ tụrụ anya na ọ ga-abịa na SD632.
Live foto nke Moto G7 Power na ndị ọzọ nkọwa e leaked
Foto ndị dị adị nke Moto G7 Power apụtala na ọnụahịa Brazil ya. Mara nkọwa!
New sụgharịrị nke Moto G7 usoro leaked: ahịa kpughere
New sụgharịrị na ịnye ọnụahịa nkọwa maka Lenovo na-abịa Moto G7 usoro e leaked. Anyị na-eme ka ị mara!
Motorola P40 na Moto Z4 Play aghụghọ tinyere nkọwa ha bụ leaked urua ke ...
Chọpụta ihe maka mmelite gam akporo nke na-amalite ịpụta maka Moto G6 Plus na India.
Motorola Moto G7 imewe kwadoro
Ejirila ngosipụta nke gosipụtara atụmatụ nke Motorola Moto G7, ọkọlọtọ na-esote nke ezinụlọ motorola G nke ga-enwe ọkwa na ihuenyo ahụ.
Moto G7 sụgharịrị ma leaked atụmatụ: layouts na agba ekpughere
Motorola si Moto G7 usoro dị nso iwebata. N'oge a, agbapụtala ụdị mmadụ anọ nke ezinụlọ ọhụrụ a.
Etu esi wụnye mmelite kachasị ọhụrụ na ngwa igwefoto Motorola: ọ rutere na-ebu akụkọ
Emegharịrị ngwa igwefoto Motorola na ụdị ọhụrụ ejiri ozi, nke gunyere atụmatụ na ọrụ ọhụụ.
Moto G7 Ike ka ejiri 5000 mAh batrị gbazie
Motorola si Moto G7 Power ka FCC gbaara 5,000 mAh nke batrị na ndị ọzọ. Dị ka nkọwa niile achọpụtara.
Esi melite Motorola One na gam akporo 9 achịcha
The Motorola One na-eju anya site na ịbụ otu n'ime etiti mbụ iji nweta gam akporo 9 achịcha, iji nwee ike ịnụ ụtọ uru nke Google OS ọhụrụ.
Onye Motorola Otu malitere ịnata Android Pie na Mexico
Gam akporo 9.0 achịcha na-ama na-abịa Motorola One na Mexico site na mmelite na-abịa na November nche kwachie.
Ejirila atụmatụ mbụ nke Moto Z4, ọkọlọtọ ọzọ nke ụlọ ọrụ America nke ga-apụta maka nhazi Snapdragon 855 ya.
Motorola Moto One dị na United States ugbu a
Motorola Moto One dị na United States ugbu a. Mara nkọwa nke ọnụahịa ya na nnweta ya.
Motorola debara chaja ikuku mbụ ya
Chọpụta ihe banyere chaja ikuku nke Motorola na-ebupụta, soro ekwentị ikuku izizi mbụ ya.
Want chọrọ ịzụta ọnụ ala dị ọnụ ala? jiri ohere Motorola ndị a
Motorola atụpụla ụlọ ahụ na windo site na ịnye ụfọdụ onyinye na Amazon nke ga-enye anyị ohere ịzụta mkpanaka dị ọnụ ala: Moto G5 maka ihe na-erughị euro 115.
Emebeputara imewe nke Moto G7 site na ihe nlere vidiyo nke ogo 360
Moto G7 apụtawo na ngosipụta vidiyo nke ogo 360. Mụtakwuo maka atụmatụ nke onye nọchiri G6 kwalitere ọnwa ole na ole gara aga.
The Motorola Moto One rutere Spain
Na Motorola Moto One ka emeputara na Spain. Chọpụta ihe banyere mwepụta nke ika n'etiti-nso ekwentị.
Emeputara Motorola P30 Note: 6.2 ″ FHD + panel nwere notch, SD636 na 5.000 mAh batrị
Emeputara Motorola P30 Note na China. Mụtakwuo banyere nke a ewepụtara n'etiti etiti nso nso a.
Motorola Moto Otu: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta. Chọpụta ihe niile banyere Motorola mbụ na gam akporo Otu dị ka sistemụ arụmọrụ.
Moto P30 bụ ọrụ gọọmentị: Motorola mbụ ama ama
Moto P30: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị. Chọpụta karịa maka ekwentị izizi mbụ nke Motorola webatara taa.
Wụkchara akpa nsụgharị nke Moto P30
Edere nsụgharị mbụ nke Motorola Moto P30. Ekele ha na anyị nwere echiche doro anya banyere imewe nke ekwentị nke ga-enwe ọkwa buru ibu.
Motorola na-ebupụta Moto Z3 na ihe mmetụta mkpịsị aka n'akụkụ na Moto Mod maka 5G
E gosipụtara Moto Z3 n'ụzọ iwu, anyị na-agwa gị nkọwa niile, ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'akụkụ na Moto Mod maka netwọkụ 5G.
A ga-enyefe Moto Z3 na August 2
The Motorola Moto Z3 ga-eweta na August 2 na eze. Chọpụta ihe banyere ụbọchị ịgba akwụkwọ nke ụlọ ọrụ họpụtara.
Moto E5 Play na gam akporo Go rutere Europe
Moto E5 Play na gam akporo Go na-ebupụta na Europe na Latin America. Chọpụta karịa banyere mbata nke ọhụrụ ala-ọgwụgwụ Motorola.
A ga-ebido Moto Z3 Play na Spain na August
Moto Z3 Play: Ahịa na ụbọchị mmalite na Spain gosipụtara. Chọpụta ihe banyere mwepụta nke ekwentị Motorola na Spain.
New oyiyi nke Motorola Onye na-leaked
Foto ndị ọzọ nke Motorola One pụtara n’ebe ahụ, yikwara agba ọcha ugbu a, nke a ọ ga-abụ ụdị ọzọ nke ngwaọrụ ahụ?
New leaked oyiyi nke Motorola One Power na-egosi ya imewe na zuru ezu
Anyị na-egosi gị nkọwa ọhụrụ nke imepụta nke Motorola One Power nke a na-agbapụta taa
New Motorola One Power leak ekpughe ya nkọwa
The Motorola Otu Ike ugbu a pụtakwara na-egosi ya ukara nkọwa, ebe anyị na-agwa gị.
Moto Z3 Play: Motorola ọhụrụ etiti
Moto Z3 Play: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị. Chọpụta karịa maka ekwentị ọhụrụ ahụ nke ruru n'etiti etiti yana nke Motorola na-eme ka akụkụ a dị ọhụrụ.
Motorola Otu Ike: Leaked oyiyi na nkọwa. Chọpụta ihe banyere ika mbụ ekwentị iji gam akporo One dị ka ya sistemụ.
Motorola, ụlọ ọrụ nke Lenovo, amalitela Moto 1S ọhụrụ na China, ọnụahịa nwere uru ndị na-echetara anyị ọtụtụ Moto G6 bidoro ọnwa gara aga yana Moto G6 Play na Moto G6 Plus.
Motorola Moto G6 dị ugbu a na Spain
The Moto G6 dị ịzụta na Spain na eze. Choputa ihe banyere ekwenti ohuru nke etinyegoro na obodo anyi.
Moto E5, E5 Plus na E5 Egwuregwu: Mbido Motorola ka mma
Moto E5, E5 Plus na E5 Play: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị. Choputa ihe banyere uzo ntinye ohuru a sitere na ulo oru nke ekpughere taa.
Motorola Moto G6, G6 Plus na G6 Play: A na-emegharị etiti etiti
Moto G6, G6 Plus na G6 Play: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị. Chọpụta nkọwa niile gbasara akara ngosi ọhụrụ nke akararịrị ewebatala n’ihu.
Ihe ohuru ohuru nke ihe oyiyi nke Moto G6 Plus kwadoro ihe eji eme ya.
Ruo Eprel, anyị agaghị ahụ Motorola ọhụrụ nke 2018
Asianlọ ọrụ Asia Motorola ga-eweta ụdị ngwaahịa ọhụrụ ya maka 2018, Eprel na-esote, ebe Moto G Series ga-abụ isi ihe na-adọrọ mmasị ya.
Ekpughere ndị nkọwa nke ọhụrụ Moto E5
Moto E5: Nkọwa nke Motorola ọhụrụ dị n'etiti. Chọpụta ihe banyere akara ngosi ọhụụ nke ika nwere ekwentị atọ.
Dị iche iche Moto G6 nkọwa na-leaked ekele GeekBench
GeekBench na-ekpughe ọtụtụ nkọwa nke Moto G6, nke na-esote n'etiti ụlọ ọrụ America nke anyị hụrụ gam akporo 8.0 Oreo dị ka sistemụ arụmọrụ na ndị ọzọ. Want chọrọ ịmatakwu? Anyị na-agwa gị nkọwa!
Moto G6 Play: New nkọwa leaked ke a benchmark. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ nke Motorola na-abịa n'izu na-abịa na MWC 2018.
Moto G6: Nkọwapụta na leaked oyiyi nke ekwentị. Chọpụta karịa gbasara nkọwa na foto izizi sitere na ekwentị Motorola ọhụrụ.
Wepụtara imewe nke Motorola Moto E5 Play
Moto E5 Egwuregwu: Edechara ihe ọhụrụ Motorola dị ala. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ dị ala nke ga-abata n'April.
Motorola na-emelite Moto Z, G Plus 4, na mmadụ isii ndị ọzọ na gam akporo Oreo. Chọpụta ihe banyere mmelite na gam akporo Oreo nke ruru ekwentị isii nke ika ahụ
Motorola ịmalite 4GB RAM Moto X6 na India
Motorola ga-ebido ụdị Moto X4 nke ama ama na India nke kachasị ike nke a na February 6st. Ngwaọrụ a ga - abịa na RAM 8.0GB yana gam akporo XNUMX Oreo nke arụnyere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọ bụ ezie na ọ ka ga-enwe otu ụdị ahụ dị ka ụdị ya abụọ ndị ọzọ nwere obere RAM. Anyị na-agbasawanye gị!
Enwere ike ịhụ ihe ngosi nke Moto E5, onye nọchiri Moto E4 na vidiyo
Enwere ike ịhụ Motorola Moto E5 na vidiyo nke, na 3D na-enye OnLeaks, anyị nwere ike ịmatakwu atụmatụ zuru oke nke ọdụ a nke a ga-eche n'etiti etiti ụlọ ọrụ ahụ. Anyị na-egosi gị!
A na-edezi katalọgụ Motorola niile maka 2018
Ozi mbụ na-acha uhie uhie nke afọ, onye nọ na Motorola agbachaala ma depụta akwụkwọ ndekọ ụlọ ọrụ niile maka afọ a.
Motorola ẹkedori a mmachi mbipụta Star Wars Moto Mod
Motorola abanyela na Star Wars fever ma hapụ Star Wars: Ikpeazụ Jedi Moto Mod maka Moto Z, ọ bụ ezie na ọ bụ naanị na China
Motorola malitere igosipụta gam akporo Oreo n'etiti Moto Z Play na Z2 Play
Ihe mbụ beta nke gam akporo Oreo maka Moto Z na Z2, adịlarị na Brazil, ka agbatị ya obere obere na mba ndị ọzọ.
Motorola na-ere okpukpu abụọ karịa ọtụtụ ngwaọrụ dịka otu afọ gara aga
Motorola, nke dị n'aka Lenovo ugbu a, ahụla ọnụọgụ nke ngwaọrụ ndị ere n'oge nkeji iri na ise gara aga.
Moto C: Nkọwa na ọnụahịa leaked. Chọpụta karịa banyere Moto C, Motorola ọhụrụ dị ala na ọnụahịa dị egwu.
Ugbu a ị nwere ike nweta Moto G4 site na 5,5 "FHD ihuenyo, 2 GB nke RAM, 16 GB nke nchekwa na igwefoto 13MO maka naanị € 149,99
Motorola agaghị emelite Moto G4 na gam akporo O
Motorla ebipụta ndepụta nke smartphones nke ga-enweta Android N nke ọ na-ahapụ Moto G4 na Moto G 4 gbakwunyere.
Ndị a bụ ngwaọrụ Motorola nke ga-emelite gam akporo Oreo [Emelitere]
Motlọ ọrụ Motorola na-ekpughe ndepụta nke ngwaọrụ ndị ga-enweta mmelite gam akporo Oreo, na-egosipụta ụfọdụ ọmarịcha ọpụpụ
Mmetụta mbụ mgbe ịnwale Moto G5S Plus, ụdị vitamin kachasị nke ezinụlọ Moto G nke pụtara maka ihuenyo 5.5-anụ ọhịa siri ike.
Mmetụta izizi mgbe anwalechara Moto G5S na IFA na Berlin, Motorola ọhụrụ Moto G ezinụlọ nwere chassis aluminium.
Mmetụta izizi na vidiyo mgbe anwalechara Moto X4 na IFA 2017 nke a na-eme na obodo Berlin. Ebe dị ịtụnanya n'etiti.
Moto G5S na G5S Plus smartphones rutere India
Lenovo - Motorola na-ewepụta smartphones ọhụrụ ya, ndị Moto G5S na Moto G5S Plus na India.
Enwere ike ikwuputa Moto X4 na Septemba 2
Motorola nwere ike gosipụta Moto X4 ya na igwefoto abụọ na ihe omume pịa sitere na Philippines na Satọde na-esote, ma ọ bụrụ na ọ naghị eme ya na IFA na Berlin
Moto X4, leaked mbụ oyiyi
A na-edozi ihe oyiyi mbụ nke Moto X4, ekwentị ọhụrụ sitere na Lenovo na Motorola nke na-apụta maka sistemụ igwefoto ya abụọ.
Mgbe mwepụta nke ọhụrụ Moto G5S na Moto G5S Plus smartphones, anyị na-enye gị a zuru tụnyere table n'etiti ma ọnụ
Nke a bụ ihe ọhụrụ Moto G5S: nkọwa, ọnụahịa na nnweta
Motorola egosikwala Moto G5S ọhụụ, ụdị Moto G5 dịwanye mma nke anyị na-agwa gị nkọwa niile.
Moto G5S Plus bụzi ọrụ gọọmentị: nkọwa, ọnụahịa na nnweta
Lenovo Motorola ka mere ọhụrụ Moto G5S Plus ama ukara, ihu ọma na Moto G5 Plus ma ihe ibu na mma
A na-enyocha ọnụahịa ndị isi nke Moto G5S na Moto G5S Plus na Europe, ọnụahịa abụọ na-eju anya n'ihi na ha ga-emesị na-eri karịa ihe a tụrụ anya ya.
Mgbe mwepụta nke Moto Z2 Force, anyị na-ewetara gị a comparative table nke a ọnụ na-akwanyere ndị Moto Z2 Play na Moto Z Force
Ihe niile gbasara Moto Z2 Force: nkọwa, ọnụahịa na nnweta
Motorola esitelarị gosipụta Moto Z2 PLay, ụdị nke a nụchara anụcha ma sie ike nke anyị ga-agwa gị ihe nzuzo ya niile
Moto E4 Plus na-akpụzi ka ihe gazi aga n’ihu n’ihe karịrị 100.000 mkpụrụ e rere na India n’ime awa 24 mbụ nke nnweta.
Lenovo weputara Moto E4 na E4 Plus na India
Lenovo - Motorola tinyere Moto E4 na Moto E4 Plus smartphones na ire na INdia na ọnụahịa nke 140 na 155 dollar ihe ruru. Nkwanye ùgwù
Moto C Plus ọhụrụ rutere India echi
Motorola na-ebupụta Moto C Plus na India echi Tuesday iji soro Xiaomi na Nokia ọhụrụ ama
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Moto E4 Plus ọhụrụ. Nka na ụzụ nkọwa na ọnụahịa
Motorola weputara smartphone ọhụrụ nke Moto E4 Plus. Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma: atụmatụ, ọnụahịa, nnweta na ndị ọzọ
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Moto E4 ọhụrụ. Nka na ụzụ nkọwa na ọnụahịa
Chọpụta njirimara teknụzụ na ọnụahịa nke Moto E4 ọhụrụ ahụ, njedebe dị ala nke Motorola rụpụtara n'oge na-adịbeghị anya yana Moto E4 Plus.
Moto Z2 Play dị ugbu a
Ndị enyemaka Lenovo, Motorola, na-ekwuputa ọkwa ọhụụ ya, Moto Z2 Play, ọnụahịa dị mma ma e jiri ya tụnyere ụdị nke gara aga.
Nyocha vidiyo nke Moto Z Play, ekwentị Motorola ọhụrụ nke na-apụ apụ maka sistemụ modular ya nke na-enye ohere itinye ngwa.
Filtered Moto G5S Plus na abụọ n'azụ igwefoto na unibody metal ahụ
Gear India na-ehichapụ onyonyo ọhụụ nke Moto G5S Plus nke na-ekpughe ihe eji emepụta igwe na-arụ ọrụ na ngwụcha anọ na isi igwefoto abụọ.
Ihe oyiyi ọhụrụ na nkọwa nke Moto G5S
Ihe onyonyo ohuru nke Motorola Lenovo na-esote ama, Moto G5S, na-ekpughe ụdị atụmatụ ahụ na ọgbọ gara aga
Official nsụgharị nke ọzọ Motorola Moto Z2 Force
Egosipụta ihe ngosipụta nke ọbịbịa Moto Z2 Force smartphone sitere na Motorola - Lenovo na-akwado imewe ya na igwefoto abụọ
Ya mere, ndị ọhụrụ Moto C na Moto C Plus, na ahịa si 89 euro
Anyị na-ekpughe ọnụahịa, njirimara teknụzụ na ụbọchị mmalite nke ọhụrụ Moto C na Moto C Plus, ọnụ ala gam akporo abụọ dị ọnụ ala.
Wepụtara nkọwa nke Moto X4 na ike nke Motorola na-ebupụta nke 2017
Ihupu nke vidiyo dị n'ime na-ekpughe njirimara nke ihe ga-abụ Moto X4 nke 2017 yana njedebe ndị ọzọ ụlọ ọrụ ga-ebupụta
Asaa Motorola smartphones na-enweta Wi-Fi asambodo, niile na MT6737 processor
Motorola na-akwadebe maka mwepụta nke ekwentị ọhụrụ asaa nwere igwe quad-isi MediaTek MT6737 na-eche ihu n'etiti na njedebe dị ala.
Motorola ga-ebuputa mbadamba gam akporo nke nwere otutu ihe
Ọdịdị arụmọrụ ọhụrụ nke mbadamba Motorola na-abịanụ bụ otu ihe ahụ dị na Lenovo Yoga Book ma melite arụmọrụ.
Wepụtara teknụzụ e ji mara na ahịa nke ọzọ Moto E4 na E4 Plus
A maraworị njirimara na ọnụ ahịa nke ekwentị mkpanaaka ndị na-esote n'etiti Moto E4 na Moto E4 Plus, nke ikpeazụ nwere batrị 5000mAh.
Motorola akwadebe mwepụta nke Moto C na Moto C Plus
Ihe ngosi ohuru na-egosi na Motorola na-akwadebe mwepụta nke smartphones ọhụrụ dị ọnụ ala akpọrọ Moto C na Moto C Plus
Nwere ike ịzụta Moto G5 Plus na Amazon na ọnụahịa dị egwu
Nwere ike ịzụta Moto G5 ozugbo na Amazon na ọnụahịa kacha mma, naanị 279 euro maka ọnụ na nkwa nke Motorola na Amazon.
Moto G5, akpa echiche
Anyị nwalere Moto G5 na vidiyo n'oge MWC 2017, ekwentị dị n'etiti etiti nwere anụ ahụ nke aluminom ugbu a iji nye ya mmetụ kachasị elu.
Moto G5 Plus, mmetụta mbụ na MWC 2017
Moto G5 Plus, ihe nkiri vidio mbụ mgbe ọ nyochachara ya na MWC 2017. Ekwentị nwere ahụ nke ejiri aluminom mee na ngwaike na-atọ ụtọ.
Ihe kachasị mma nke etiti ọhụrụ maka gam akporo
Nke a bụ ihe anyị họọrọ nke atọ kachasị dị n'etiti n'etiti smartphones sitere na Mobile World Congress nke afọ a